Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Burundi Oo Koox Shufto Ahi Ay Qudha Ka Jartay | Saxil News Network
Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Burundi Oo Koox Shufto Ahi Ay Qudha Ka Jartay
Wasiirka deegaanka ee dalka Burundi Emmanuel Niyonkuru ayaa xalay saqdii dhexe la dilay ka dib markii isaga oo ku sii jeeda gurigiisa ay koox shufto ah rasaas huweyeen.
Wasiir Emmanuel Niyonkuru ayaa da’diisu ay maraysay 54 sano, waxaana lagu soo waramayaa in uu ka soo rawaxay xaflad loogu dabaal degayo sanadka cusub ee 2017-ka waxaana goorta la dilay uu hayay jidadka taga xaafadiisa.
Warkaasi waxa warbaahinta u xaqiijiyay taliska ciidamada booliska ee dalka Burundi oo cadeeyay in ay ku raad joogaan dadkii dilka wasiirka ka dambeeyay.
Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza oo isna warbaahinta u waramay ayaa xusay in cida ka dambaysa dilka wasiirku aanay ciqaab la’aa dunida sii joogi doonin isla markaana ay ka go’an tahay sidii ay cashar lama ilaawaan ah u dhadhansiin lahaayeen.
Dalka Burundi oo ku yaala qaarada afrika ayaa ah mid aanu xaalkiisu deganayn, ka dib markii muran uu ka dhashay doorashooyinka iyo muddo kordhin aan xad lahayn loo sameeyay madaxweyne Pierre Nkurunziza.
Dad tiro badan ayaa ku dhintay rabshado dalkaasi ka dhacay, waxaana sidoo kale iskaga yaacay dalkooda dad aanay tiradoodu ka yarayn kumaanaan.